Shaqaalaha Dowladda oo ka cabanaya mushaar la’aan | KEYDMEDIA ONLINE
Shaqaalaha Dowladda oo ka cabanaya mushaar la’aan
Fahad iyo Farmaajo, ayaa qudhooda doonaya in ay jidkaas maraan si ay xoolaha dad weynaha ugu adeegsadaan doorashooyinka si ay dib ugu soo laabtaan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Shaqaalaha Dowladda (Civil servant) ayaa ka cabanaya mushaar la’aan muddo labo bil ah, waxayna ka cabsi qabaan in bishii saddexaad oo xariir ah la duudsiiyo xaqii ay lahaayeen.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen qaar ka mid ah shaqaalaha Dowladda, gaar ah kuwa gobolka Banaadir, waxaan la bixin mushaaraadkii bilahii June iyo July, iyadoo si weyn looga cabsi qabo in la waayo midka bisha hadda dhamaadka u dhow ee August.
Howl-wadeenno ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda oo la halday KON, waxa ay dafireen in mushaarku maqan yahay muddo labo bil ah, waxayne sheegeen in kaliya bishii July qeyb ka mid ah shaqaalaha rayidka aysan helin xuquuqaadkii ay lahaayeen gaar ahaan mushaarka.
Xubnaha ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda ee la hadlay KON, waxa ay xuseen in qorshuhu yahay in bishaan 8-aad la bixiyo lacagtii bishii 7aad, taas oo ka dhigeysa mushaaraadka August, ay ka maqnaan doonaan shaqaalaha.
Xukuumadda Rooble, ayaa la kowsatay dhaqaalo la’aan xooggan, waxaana la filaya inuu dhawaan u safro dalalka Sacuudiga, Imaaraatka iyo Qatar, halkaas oo la rumeysan yahay inuu ka soo heli doono sooryo siyaasadeed oo howlaha lagu kala fududeeyo.
Keydmedia Online, waxa ay xasuusataa, in ku dhawaad muddo sanad ah ay shaqaalaha Dowladdu mushaar la’aan ahaayeen dhamaadkii Dowladii Xasan Sheekh Maxamuud, taas oo keentay in Kooxdii Xasan Sheekh, lacag xooggan u adeegsadaan doorashooyinkii 2016/2017.